Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xijaab si loo soo celiyo files ka / lumay xijaab tirtiray / dhaawacan yahay?
Waa maxay xijaab?
Disk A adag u qaybsan yahay mid ka mid ah ama in ka badan kala qaybsanaayeen oo macquul ah oo maamulka khayraadka fiican oo aad wada xajisaan xogta qaybiyey meelo kala duwan sida looga baahan yahay user. Kuwaas oo kala qaybsanaan macquul ah waxaa loo yaqaan qoruhu iyo siin khayaal ah ee qaarkood cajaladaha adag oo madax bannaan oo ka shaqeeya wada noolaanshaha. Sida caadiga ah, kuwaas oo lagu magacaabo s "C", "D", "E" iyo "F" drives. Drive C waxa uu caadi ahaan ka kooban yahay nidaamka qalliinka iyo files ay baahisey iyo xogta. Drive F u dhiganta ROM CD / DVD. Qoruhu D iyo E karaa ama ma laga yaabaa jooga computer ama laptop noqon.
Dhibaatooyinka la xiriira maqaal qoruhu computer
Waxaa jiro liis ku dhan waxyaalaha xumaan kara iyadoo xijaab computer disk adag ah labada shil ama haddii kale. Qaar ka mid ah arrimaha ugu badan waxay ku qoran yihiin hoos:
Barzakh tirtiray: qoruhu dhif aad isu tirtiray wax haddii aad si dhab ah u qaldan disk adag. Badanaa maqaal qoruhu ugu heli tirtiray kac ahayn.
Formatted Barzakh, Like tirtirka, qoruhu formatted inta badan waa uu yeelin falimihii dadka naftooda leh. Laakiinse iyagu mararka qaar is formatted baqdin baadi software daran qaar ka mid ah.
Qoruhu waxyeelo fayrasyo: Fayrasyada waa xun; ay karnaa qoruhu macno aan waxtar lahayn iyo xogta unrecoverable kaas oo noqon kara daadsanaanta dhab ah haddii xogta in muhiim ahaa oo aad ugama dhigin gurmad ah.
Isticmaalka Wondershare Data Recovery dib u soo ceshano xog ku saabsan Mac ah
Ka soo kabashada tirtiray ama laga badiyay files ka computer disk adag noqon kartaa kaaftoomi weyn gaar ahaan haddii aadan haysan gacmaha qaar ka mid ah waayo-aragnimada ee dhib your computer u gaar ah. Wondershare Data Recovery Waa software ah dadka oo dhan sida halkaas oo baqdin la'aanta ah ee waayo-aragnimo ah ama waqti aan awoodi karin in ay sameeyaan soo kabashada xijaab on iyaga u gaar ah a. Wondershare Data Recovery Ogolaanaysaa user dib ugu fadhiisan oo u gutaan, waxa aanu dhammaan geedi socodka dib u soo kabashada laftiisa. Wondershare Data Recovery Lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/data-recovery/ . A liisanka hal sano oo waxaa lagu iibsan karaa kaliya $29.95, halka a-time nolosha liisan aad ku kici doona $39.95 oo kaliya. Waxaa la socon kara Windows Vista, 7, 8 iyo 8.1 oo ay la socdaan Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 iyo bixisaa waafaqsan badan oo qalabka sida laptops, desktops iyo xitaa kaamirooyinka.
Download iyo rakibi Wondershare software Data Recovery aad laptop ama computer. Burcad Wondershare Data Recovery mar rakibo waa dhameystiran yahay. Waxaad si toos ah loo gudbiyaa hab Wizard taas oo xitaa kuu ogolaanaysaa inaad dooro nooca xogta in aad rabto in aad soo kabsado. Dooro noocyada file in aad rabto in aad soo kabsado si waafaqsan baahida loo qabo. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay nooc kasta oo xog ka soo kabsaday, si fudud u dooro "Dhammaan Noocyada File" oo ku dhacay "Next".
Wondershare Data Recovery Hadda ku weydiin doonaa inaad u meesha xogta laga yaabaa in ay ka hor inta aanad la tirtiro / lumay. Dooro ku haboon ka mid ah liiska kuwa loogu talo galay ama si fudud u dooro "Ma xasuusan karo" haddii aadan hubin goobta. Guji "Next" in la sii wado.
Next, Wondershare Data Recovery weydiin doonaa in aad dooratid nooc scan ku salaysan doorashadaada. Haddii aad rabto in aad soo kabsado files kaliya dhawaan la tirtiro, dooro "Enable Deep Scan" laakiin haddii aad rabto inuu ka soo kabsado files in laga yaabo in aad ayaa laga badiyay ka badan waqtiba waqtiga, tagto "Enable cayriin scan" doorasho. Guji "Start" in ay oggolaadaan in software ah laga bilaabi karo habka file waxkaqabasho. Marka software sameeyo ay shaqo, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan faylasha baxey. Markaas Waxaad dooran kartaa kuwa aad rabto in aad soo celin by iyaga xulashada iyo gujinaya ikhtiyaarka "Soo Celinta".
Sida loo xaliyo "Barzakh ku guuldareystay" dhibaato ku Mac OS
Baadi Tan waxaa kala kulantay marka la isku dayayo in xijaab drive ka Mac OS X.
Sababta ka dambeysa ay dhibaatadu tahay in kasta oo aan la garanayn, arin fudud waa la heli karaa. Si aad uga takhalusi ah "Barzakh ku guuldareystay" dhibaato ku Mac OS, raac tallaabooyinkan fudud:
Reboot Mac soo galeen Single User Mode by haysta Command + S inta lagu jiro boot
Ugu degdeg ah amarka, nooca: / sbin / fsck -fy
Marka fsck dhamaato, nooca "hartay" ama "reboot" reboot
Boot Mac sida caadiga ah, loo xaqiijiyo disk mar kale ku Disk Utility, iyo xijaab sidii caadiga ahayd.
Waxa la sameeyo marka aad ku xanuunsado drive failure adag
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Sony Cybershot
ThinkPad Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga qorka ThinkPad
Sida lagu Helo Back Faylal ay ka Seagate External Hard Drive
> Resource > Ladnaansho > Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xijaab si loo soo celiyo files ka / xijaab tirtiray laga badiyay